#LAND - Koorso Madaniga ah 3D oo loogu talagalay shaqooyinka madaniga - Heerka 4 - Geofumadas
#LAND - Koorso Madaniga ah 3D loogu talagalay shaqooyinka madaniga ah - Heerka 4
Sharaxaada, bullaacadaha fayadhowrka, shirqoollada, isgoysyada. Baro sida loo abuuro naqshadaha toosan ee aasaasiga ah iyo ula shaqeynta softiweerka 'Autocad Civil3D' oo lagu dabaqayo Sahanka iyo Howlaha Bulshada
Tani waa afraad of set ah Koorsooyinka 4 loo yaqaan 'Autocad Civil3D ee Sahaminta iyo Shaqooyinka Rayidka' kaas oo kuu oggolaanaya inaad baratid sida loo maareeyo barnaamijkan aadka u fiican ee 'Autodesk' oo loo adeegsado mashaariic kala duwan iyo goobo dhisme. Noqo khabiir ku ah softiweerka waxaadna abuuri kartaa dhismeyaal dunid, xisaabin kara qalabka iyo qiimaha dhismaha waxaadna abuuri kartaa naqshado waaweyn oo jidad, buundooyin, bullaacado iyo kuwa kale.
Koorsooyinkani waxay soo saareen saacado u hibeyn ah, shaqo iyo dadaal ah, iyagoo soo uruurinaya xogta ugu muhiimsan ee ku saabsan mawduuca madaddaalada iyo cilmiga bulshada, iyagoo soo koobaya tiro badan oo fikradeed isla markaana ka dhigaya kuwo wax ku ool ah, si aad si sahlan wax uga baran karto Ku dheereeya fasallo gaagaaban laakiin gaar u leh mowduuc kasta kuna tababar dhammaan (dhabta) xogta iyo tusaalayaasha aan halkaan ku bixinno.
Hadaad rabto inaad biloowdo maaraynta barnaamijkan, kaqeyb galka koorsadan waxay kuu badbaadin doontaa isbuucyo shaqo kadib adoo baaris ku sameeynaya wixii aan horey u baarnay, sameynta tijaabooyinka aan sameynay, iyo sameynta khaladaadkii aan horey usameynay.
Aan kuu soo bandhigno adduunkaan 'Autocad Civil3D, kaas oo ah aalad awood leh oo lagu yareeyo waqtiyada badan ee qaabeynta iyo xisaabinta iyo fududeynta shaqadaada la xiriira mihnadda.
Yaa loogu talagalay?
Koorsadani waxaa loogu talagalay farsamayaqaannada, farsamoyaqaannada iyo aqoonyahannada aqoonta u leh Baadhitaanka, shaqooyinka madaniga ah ama kuwa la xidhiidha, kuwaas oo doonaya inay ka bilaabaan adduunka naqshadda waddooyinka, shaqooyinka toosan, dhismeyaasha dhulka iyo dhismaha ama kuwa doonaya inay xoojiyaan xirfadahooda maamulka Qalabkan awood badan.
QODOBKA MAXKAMADA DHEXE (4 / 4)
- Dhismaha Template.
- Jiilka otomatiga ah ee qorshaha dabaqa.
- Jiil toos ah oo diyaarado ah oo ku jira muuqaal.
- Jiil otomatik ah oo ah qorsheyaasha dabaqa-profile.
- Jiil otomatik ah oo ka mid ah diyaaradaha iskutallaabtu.
Qeexid iyo Qeexid
- Gogol dhaaf iyo kala guuritaan ah.
- Isku dheelitirka mugga
- Jiilka dusha sare.
DHAQANKA- Dhismaha isgoyska.
- Ku darista laamaha
- Qaabeynta shaqada toosan ee isgoyska
- Dhisida isugeyn ama isugeyn.
- Xisaabinta aagagga iyo bedka
- Is waafajinta
- Englobes iyo desenglobe
SHAQADA XUQUUQDA SURFACE
- Naqshadeynta dusha sare
- Falanqaynta salka
- Biyo-mareennada iyo biyo-hoosaadka biyo-biyoodka
DAAWEYNTA ISKUULADA KANSANKA IYO BADBAADADA
- Ujeedo ujeedo
- Xisaabinta agabka
Kaqeybgal qaabeynta jidadka iyo mashaariicda madaniga iyo bulshada.
Markaad sameyneyso sahamis topografi ah oo berrinka ku yaal, waxaad u soo dhoofsan kartaa bartahan dhulka 'Civil3D' oo waqti badan ayaad ku badbaadi kartaa sawirka.
Abuur meelaha dusha sare ee cabbirrada 2 iyo 3 oo abuuro xisaabinta sida aagga, mugga iyo shaqada dhulka
Dhisidda isku toosan toosan iyo toosan oo u oggolaanaya qaabeynta shaqo toosan sida jidadka, kanaalada, buundooyinka, jidadka tareenka, xariiqyada korantada sare, iyo kuwo kale.
Diyaarso qorsheyaal xirfad leh si ay ugu soo bandhigaan shaqooyinka qorshe ahaan iyo muuqaal ahaanba.
Kombiyuutar leh shuruudaha aasaasiga ah ee Hard Disk, RAM (ugu yar 2GB) iyo processor-ka Intel, AMD
Autocad Civil software 3D nooc kasta ha noqotee
Aqoonta aasaasiga ah ee Sahaminta, Madaniga ama wixii la xiriira
Koorsadan waxaa loo dhisay qofkasta oo doonaya inuu barto sida loo maareeyo barnaamijka kumbuyuutarka.
Farsamayaqaannada, Teknolojiyadda ama Xirfadleyda Sahaminta, Madaniga ama kuwa la xiriira kuwaas oo doonaya inay horumariyaan waxsoosaarkooda iyo xirfadooda ay ku shaqeeyaan barnaamijka softiweer.
Qof kasta oo raba inuu barto inuu sameeyo naqshadaha toosan ee shaqada iyo mashaariicda sawirka sawirka.
Koorsooyinka Madaniga ah 3D Koorsooyinka Shaqada Madaniga ah
Post Previous«Previous #CODE - Koorsada Horudhaca Barnaamijka
Post Next #LAND - Koorso Madaniga ah 3D loogu talagalay shaqooyinka madaniga ah - Heerka 3Next »